Opham – S2M / Tetikasa Bledi-solidaire: notolorana fanampiana 8 886 000 Ar ny Akany Sainte Marie - ewa.mg
News - Opham – S2M / Tetikasa Bledi-solidaire: notolorana fanampiana 8 886 000 Ar ny Akany Sainte Marie
Mbola ny malala-tanana
sy mpiray ombona antoka malagasy sy vahiny no mampihodina ny Akany
Sainte Marie, amin’ny fandraisana an-tanana ireo ankizy
Efa-taona amin’ity taona ity ny
nitondra fanampiana ho an’ny Akany Sainte Marie eny Mahamasina ny
Office pharmaceutique malgache (Opham) sy ny fivondronan’ny
toeram-pivarotana lehibe S2M ahitana ny Jumbo Score, ny Score ary
ny Supermaki. Ampahany amin’ny vidin’ny ronono amin’ny boaty
Bledina, amidy eny amin’ireo magazay lehibe, ireo ary hafaran’ny
Opham no hakana ny tohana ara-bola, amin’ny alalan’ny tetikasa
“Bledi-solidaire”. “Nitombo raha nitaha ny tamin’ny taon-dasa
satria nahatratra 8 886 000 Ar ny vola natolotra ny
mpitantana ny toeram-pandraisana tamin’ny boaty 4 443 lafo
nandritra ny volana jona ary nomena ny anarana Bledi-solidaire”,
hoy ny tale jeneralin’ny Opham, i Philippe Edraz, omaly teny
Mahamasina. “Vonona izahay hanohy ny fanampiana ny akany satria
tsapanay ny asa ataon’izy ireo ho an’ny ankizy Malagasy”, araka ny
fanamarihan’ny tomponandraikitry ny S2M, i Marc Sheffer.
20 ny ankizy raisina kilasimandry
ao amin’ny akany amin’izao fotoana izao ary ankizy tandindonin-doza
avokoa izy. Zanak’olona mamita sazy any am-ponja, iharan’ny
herisetra na narian’ny fianakaviany, zanak’adala na koa mila
fitsaboana akaiky ireo karakaraina ao amin’ny akany. Avy amin’ny
didim-pitsarana avoakan’ny mpitsara manokana ny ankizy no mametraka
sy manala ny zaza rehetra eo amin’ny Akany Sainte Marie. Ankoatra
ireo, misy ankizy 86 hafa tohanana amin’ny sakafo sy ny
fampianarana fa mijanona eny anivon’ny fianakaviany ihany.
“Ampirisihina koa ireo ray aman-dreny 56 hanaovana tantsoroka
hitady asa fivelomana ka ho afaka hikarakara ny zanany ara-dalàna”,
hoy ny mpanorina ny akany. Raha mbola azo avela eny amin’ny
ankohonany ny zaza, izay ny vahaolana idealy fa tohanana fotsiny
izy ireo. Mamboly sy miompy, mivarotra, manao biriky ny ankamaroany
ary mahavelombolo ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana.
“Vao teraka ka hatramin’ny 10 taona
no mahazo mijanona ao ny ankizy noho ny fotodrafitrasa voafetra
ihany”, hoy ny mpanorina ny akany, Rahantamalala Irène. Rehefa
tonga ny 10 taona, afindra amin’ny toeram-pandraisana sahaza ny
zaza satria misy ny fiaraha-miasa amin’ny fitsarana. Mpiasa
karazany maro manana ny fahaiza-manaony ny mampihodina ny akany.
Mampiofana ny tanora koa ny akany mba hahaleo tena izy ireo any
aoriana. 15 ny mpiofana raisina isan’andiany manao zaitra sy
fikirakirana ny hazo. Misy fepetra ny fidirana amin’ny fanofanana
momba ireo taranja roa ireo.
L’article Opham – S2M / Tetikasa Bledi-solidaire: notolorana fanampiana 8 886 000 Ar ny Akany Sainte Marie a été récupéré chez Newsmada.
Nisy naka an-keriny indray koa ny lehilahy iray 40 taona tany Andriamena Tsaratanana, afakomaly alina. Voalazan’ny fampitam-baovao fa tantsaha sy mpiompy ny asan’ity raim-pianakaviana ity. Hatramin’izao, tsy mbola nisy fitakiana vola nataon’ireo jiolahy tamin’ny fianakaviany. Fantatra fa efa nisy naka an-keriny toy izao koa ny ray aman-drenin’ity raim-pianakaviana ity, ny volana janoary 2019 lasa teo. Ny nampivarahontsana tamin’ity fankana an-keriny ny ray aman-dreniny ity dia ny taolam-balon’izy mivady sisa hitan’ny fianakaviana, tapa-bolana taorian’ny fakana an-keriny azy ireo. Mitaintaina mafy, araka izany, ny fianakaviany.Nidoboka am-ponja ao Antalaha rehefa avy natolotra ny fampanoavana, ny zoma teo ireo dahalo tompon’antoka tamin’ny fanafihana sy fanakanan-dalana any amin’ny faritra Sava. Ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ampanefena Vohémar no nahasambotra azy ireo. avy nanafika fiara 4×4 iray sendra nandalo tao Ankijanibe Vohémar ry zalahy ka lasan’izy ireo tamin’izany ny vola 50 tapitrisa Ar. Nanao fanarahan-dia avy hatrany ny zandary ka tratra tamin’io fotoana io ihany ry zalahy niampy ny olona iray mpiray tsikombakomba amin’izy ireo. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Varotra sakafo masaka: hatramin’ny 5 tapitrisa Ar ny sazy
Manomboka amin’ny 5 000 ka hatramin’ny 5 tapitrisa Ar ny sazy ho an’ireo mivarotra hani-masaka na sakafo masaka tsy manara-dalàna eto Antananarivo Renivohitra. Mbola esorina aminy koa ny toeram-pivarotana. Anisan’ny nivoitra ireo tamin’ny fampiantsoan’ny CUA an’ireo tompona fivarotra hani-masaka rehetra, anatin’ny tsena miisa 29, tantanin’ny kaominina. Notanterahina tetsy Isotry izany ary notarihin’ny avy ao amin’ny departemanta misahana ny rano sy ny fanadiovana avy etsy amin’ny BMH. Nampahafantarina tamin’izany ny momba ny lalàna mifehy ny fikarakarana ny sakafo ary ny fepetra rehetra momba izany, tafiditra amin’ny alalan’ny « code municipale d’hygiène – CMH » izany. Teo koa ny fampahafantarana ireo sazy mety hahahazo azy raha tsy manaraka ny lalàna. Efa nisy ny fidinana ifotony nataon’ny CUA – BMH – Polisy monisipaly miaraka amin’ny eo anivon’ny tsena nialoha izao fivoriana izao. Nanampy izany ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana amin’ny fanentanana ireo mpivarotra hani-masaka sy ny fampahalalana azy ireo ny CMH. “Tanjona ny hitsinjovana ny fahasalaman’ny mponina eto Antananarivo Renivohitra sy ny fampandraisana andraikitra ireo mpivarotra hanaraka ny fenitra momba ny asa fikarakarana ny sakafo”, hoy ny tompon’andraikitra, ny Dr Ramaherito Andrianaly. Mbola fanentanana aloha ny atao amin’izao fa tsy mihatra ny sazy.Synèse R.L’article Varotra sakafo masaka: hatramin’ny 5 tapitrisa Ar ny sazy a été récupéré chez Newsmada.
Nifanojo tamin’ny vokatry ny famotoran’ny Zandarimaria ny valin’ ny fizahana nataon’ny mpitsabo tamin’ireo eni-mianaka, reny sy ny zanany dimy, izay nindaosin’ny fahafatesana tany Maromandraisoa-Tsarahonenana, any Antsirabe II, tamin’ny 12 septambra lasa teo. Nanasongadina ny fisian’ny fahasemporana ireo zandary, raha nampahafantatra ny fisian’ny poizina avy amin’ny fofon’ arina tao amin’ny trano nitoeran’izy eni-mianaka ireo ny mpitsabo. “Fahafatesana avy amin’ny fahasemporana hatramin’ny 90% no nihatra tamin’ireo olona ireo”, hoy iretsy farany. Voarakitry ny fitanana an-tsoratra nataon’ireo mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana, taorian’ny loza, ny nahitana arina fandrehitra mitsitokotoko efa lasa lavenona tao ambany rihan’ny trano nahitana ny razan’izy enina mianaka. Mbola nahitana arina fandrehitra mivaingana mitsitokotoko ihany koa, tsy lavitra teo. Tsiahivina fa ny raim-pianakaviana nody tao antrano nahita azy eni-mianaka nitsotra teo am-pandriana saingy efa samy tsy nisy aina intsony,tamin’ny sabotsy lasa teo. L’article Voka-panadihadiana tany Antsirabe :: Matin’ny entona misy poizina izy enina mianaka est apparu en premier sur AoRaha.
Fihariana isan-karazany: entanina ho matihanina ireo mpanao asa tanana
Fihariana manan-danja ho an’ny fampandrosoana ny asa tanana, sehatra entina miady amin’ny fahantrana. Asa tanana, nankinina miaraka amin’ny indostria sy ny varotra sahanin’ny minisitera iray (Mica), hiteraka asa matihanina hitondra fampandrosoana eto amin’ny firenena.Ataon’ny minisitera misahana izany ny mametraka tontolo hanomezan-danja ny asa tanana mifandraika amin’ny kolontsaina hisian’ny fampandrosoana ny toekarena. Amin’izao vanim-potoana korontanin’ny Covid-19 izao, haverin’ny minisitera ny hasin’ny mpanao asa tanana, miaraka amin’ny fanomezana vahana ny kalitaon’ny asa vita.Entanina ireo mpanao asa tanana ho matihanina hatrany hitazona ny kalitaon’ny asa vita. Fihariana karazany 14 ny tohanana amin’izany: vita avy amin’ny hazo, ny vy, ny vato, ny lamba, ny akora samihafa avy amin’ny biby sy ny zavamaniry. Karazany maro samihafa ny vita avy amin’ireo, toy ny haingon-trano, ny firavaka, ny fitafy, ny satroka, ny kiraro. Manana ny mampiavaka azy manokana ny asa tanana vita malagasy amin’ny tsena eto an-toerana sy any ivelany.Laharam-pahamehana eo anivon’ny Mica, araka izany, ny manohana teknika sy manampy fitaovana. Ho fantatra tsy ho ela ny hatao sy ny vokatry ny fitsidihana ny toerana misy mivelona amin’ireny. Afantoka ho matihanina ireo mpanao asa tanana ho fampiroboroboana ny fihariana misy azy ireo. R.MathieuL’article Fihariana isan-karazany: entanina ho matihanina ireo mpanao asa tanana a été récupéré chez Newsmada.